Sunday August 30, 2020 - 08:59:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda dabadhilifka Imaaraatka Carabta ayaa ku dhawaaday in ay laashay oo ay baabi'isay qaanuun ay tobanaan sare ka hor soo saartay oo mamnuuc ka dhigayay in xiriir lalayeesho maamulka Yahuudda Sahyuuniyadda.
Bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraatka ayaa lagu sheegay in labaabi'iyay qaanuunkii Goynta ama qaanuunul Muqaadacah kaasi oo lasoo saaray sanaddii 1972-dii.
Wareegto rasmi ah oo uusoo saaray Max'med Bin Zaayid dhaxal sugaha Imaaraatka ahna wasiirka arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in qaanuunkaas goynta ah lagu bedelay xiriirinta Yahuudda iyo kamira dhalinta waxa loogu yeeray nabadda iyo wada noolaashiyaha.
Wareegtadan ayaa u ogolaanaysa shirkadaha ganacsiga Yahuudda iyo kuwa Imaaraatka in ay isku dhaxmilmaan oo ay saxiidaan heshiisyo ganacsi, sidoo kale dadka ku dhaqan Imaaradaha wadankaas sida Dubai iyo Abuu Dhabi ayaa loo fasaxay in ay booqan karaan dhulalka uu maamulo maamulka Yahuudda.
Dhinaca kale R/wasaaraha Yahuudda ayaa si diiran usoo dhoweeyay tallaabada ay qaadeen maamulayaasha xukuumadda Abuu Dubai.
Bin Yamiin Netenyaahu oo hadlayay ayaa go'aanka soo baxay ku tilmaamay mid barwaaqo iyo horumar u horseedaya Yahuudda lagu deegaameeyay dhulalka barakaysan ee Shaam.
Tani ayaa qeyb ka ah waxa loogu yeero Safqatul Qarni oo ah mashruuc dhagar miiran oo uu Trump soo allifay ayna fulinayaan dawaaqiidda Carbeed ee xoogga ku haysta dhulka Jaziiradda Carabta.
Waa mashruuc muslimiinta Falasdiin xaqooda duudsiinaya islamarkaana ogolaanaya in shirki iyo xummaan idilkeed lagu dhax faafiyo dhulalka xurmada leh